Ranesa Firiana: “Iandrasana ny mpifidy vaventy ny momba ny loholona” | NewsMada
Ranesa Firiana: “Iandrasana ny mpifidy vaventy ny momba ny loholona”
“Aorian’ny fifidianana ben’ny Tanàna sy mpanolotsain’ny Tanàna no manomboka mihatra io fanapahan-kevitra io. Rehefa vita ny fifidianana ben’ny Tanàna sy mpanolotsain’ny Tanàna manaraka eo, mety hisy ny fifidianana loholona.” hoy ny mpahay lalàna, Ranesa Firiana, momba ny fampihenana ny isan’ny loholona ho 18 raha 63 izany amin’izao, na ny mety hanafoanana ny Antenimierandoholona. Aorian’ny fifidianana mpifidy vaventy no hampiharina ny hoe fidin’ny mpifidy vaventy ny loholona 12, ary ny enina tendren’ny filohan’ny Repoblika.
Na izany aza, mety hisy koa ny tranga iray: araka ny velirano nataon’ny filoha hoe hisy ny fitsapan-kevi-bahoaka mba hanafoanana ny Antenimieradoholona.
Raha misy izay fitsapan-kevi-bahoaka izay alohan’ny fifidianana ben’ny Tanàna sy mpanolotsain’ny Tanàna, mety ho foana tanteraka ny Antenimierandoholona ka tsy hihatra akory ny didy hitsivolana vao nolanina hampihenana ny isan’ny loholona.
Raha ny fanazavan’ny HCC tokony harahina ny fepetra : mandalo eny amin’ny Antenimierandoholona sy ny Antenimierampirenena ny volavola fanovana ny lalàmpanorenana. Rehefa feno izany fepetra izany, azo aroso ny fitsapan-kevi-bahoaka.